Ukubuyekezwa kwe-LockUp Tamil Movie kanye ne-Synopsis  | XperimentalHamid
I-LockUp Tamil Movie ukubuyekeza and Synopsis 
August 29, 2020 by Qasim Khan
Lapha uzothola ukubuyekeza kwe-LockUp Tamil movie ne-synopsis yayo. Njengoba kungekho cinema iya ngenxa yokwesaba ukutheleleka izindlu zokukhiqiza ziphendukela ekusakazweni kwe-inthanethi. Uma nawe ungumthandi wezikrini zodonga namadivayisi aphethwe ngesandla wokuzijabulisa. Nansi indlela yokuthi uthole ukuzijabulisa.
Uzothola umzamo wokuqala wokudonswa phansi ofanelekayo. Funda i-athikili ephelele ukuthola amaphuzu aqinile futhi abuthakathaka we-movie nesakhiwo esikhulu sokuba nomqondo ojwayelekile. I-LockUp Trailer isithokozisile sonke, kuthiwani ngayo yonke i-movie. Thola lapha.
Ukubuyekezwa Kwe-Movie Movie
I-LockUp Tamil Movie ukubuyekeza 2020
Indawo yesiTamil MUkubuyekezwa kwe-ovie
Ama-movie angenye entsha ohlwini ongayikhipha ekukhulweni kwedijithali phakathi nokuvalwa. UVaibhav, uVenkat Prabhu, u-Easwari Rao, uPoorna, uVani Bhojan, noMime Gopi badlala kahle kwi-movie eqondiswa yi-SG Charles esemthethweni ngomculo ka-Arrol Corelli noSanthanam Sekar njengo-Cinematologist.
Uma ufuna ukubukela i-movie vele ungene epulatifini ye-OTT Zee5. I-movie ayichithi sikhathi ekubekeni isisekelo sendaba ukuthi iqhubeke.
Le movie yaseTamil ilandela impilo kamhloli ongaphansi kukaMoorthy noConstable Vasanth. Kusebenza isikhulu esisha edolobheni esizobamba icala lesiteshi la madoda amabili esebenza. Igama lakhe ngingu-Ilavarasi futhi ungene esikhundleni sikaSampath owabulawa.
Ifilimu iqala ngo-Ilavarasi ethola izindaba zokubulawa kwephoyisa lesi siteshi eBhungalow yakhe. Uphenyo luyaqalwa kanti lapha kungena uMurthy ofinyelela kuqala endaweni yobugebengu. Umsolwa, ongumbonisi wendawo, uyavuma ukubulala nemininingwane yokuthi wenza kanjani lo msebenzi.
Kodwa-ke, u-Ilavarasi ubona sengathi kukhona ukungahambisani esitatimendeni esinikezwe umsolwa. Ukuze aqinisekise ukuthi uqala ukuqoqa ubufakazi obufanele abasizwa nguMurthy. Ngaso leso sikhathi uVasanth, leli phoyisa, owayesebenza ecaleni lokubulala inceku ethile yasendlini uyazi ukuthi ukufa kwakhe kuhlangene nephoyisa elibulewe.
Ngokushesha nje u-goon ovumile kulokhu kubulawa kanye nesambulo esiphula izinzwa esihlobene nokubulawa kwephoyisa senza umdlalo wonke womdlalo.
Ngomugqa wendaba oyinkimbinkimbi kanjalo nenombolo yabalingisi abaholayo abasebenza kwiziza ezahlukahlukene umqondisi wenza umsebenzi omuhle ngokuqiniseka ekugcineni konke ukulandisa kunengqondo futhi kuxhunyiwe. Lokhu kugcina izithameli zibandakanyeka kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni futhi umuntu akaze ayithole indaba iduka.
Izinhlamvu ezimbalwa ekuqaleni ezazingabukeki zibaluleke kangako ku-movie ngokuzumayo zithola isigaba esithe xaxa njengoba i-LockUp yathuthukela ekufezeni.
Ukwethulwa kokushibilika okufanele nokuphenduka kuhla lwendaba ngezikhathi ezifanele kugcina imood ihlala ingeneme futhi umuntu akatholi ndawo evusa isizungu.
Isici esingeziwe okufanele sishiwo ezicini ezinhle ze-movie ukuthi le movie yaseTamil ithathwe kunoma yikuphi ukuphambuka okungenamqondo esakhiweni esikhulu. Ngisho nezindawo ezingasonjululwa ekuqaleni zingambozwa kamuva.
Izinga lokukhiqiza libonakala linciphile futhi ukuvumelanisa izindebe ngezikhathi ezithile kusenza sizizwe ukuhlela kwenziwa ngokushesha. Uma kungabhekwana nalokhu bekungathuthukisa futhi inani lale filimu yeTamil Lock Lock futhi ethintekayo.
Wonke umlingiswa omkhulu wenze umsebenzi oncomekayo ukusuka ekuqaleni kuya ekugcineni. Uzothola u-Eeswari Rao noVenkat Prabhu benza ubulungiswa endimeni nakubalingiswa babo.
UPoorna noVaibhav bazamile ukufinyelela kubha ebekwe ngabalingisi ababili bangaphambili. Ngenkathi iVaaani Bhojan ibonakala ibonakala lapha nalaphaya yenza khona ukubakhona isikhashana noma ngakho konke kuyo yonke ifilimu.
Ukukhuluma nge-cinematography, ukuhlela kanye nomculo, uSananamanam Sekhar, u-Anand Geraldin, no-Arrol Correli benze umsebenzi omuhle kakhulu. Kepha iso elinamandla ungabona amaphutha lapha nalaphaya.
Ekupheleni kokubukezwa kwe-movie ye-LockUp Tamil, besizoyibiza ngokuthi yi-movie ephakathi nesilinganiso efanele ukubukwa. Njengoba ikhishwa online, asikho isidingo sokuthi uphume, iwashi eliphephile, nokuzijabulisa okuhle.
Izigaba Ama-movie, Izibuyekezo Amathegi I-LockUp Synopsis, Ukubuyekezwa kwe-LockUp Tamil Movie, I-LockUp Tamil Movie ukubuyekeza 2020 Imeyili kwemikhumbi
Isahluko 221 - 222 seDish Best Served Cold Novel
Isahluko 605-606 seRevelnd Insanity Novel